Madexweyne Farmaajo oo Doobbo Dillaacsaday - Caasimada Online
Home Maqaalo Madexweyne Farmaajo oo Doobbo Dillaacsaday
Marki uu billaabay inuu fagaarayaal dadka kala hadlo, Farmaajo wuxuu jeedin jiray hadallo loo riyaaqo. Jeceylka loo qabay hadalladiisa inta badan waxaa hagi jiray, hanki isaga loo qabay. Muddadi koobnayd ee uu raysulwasaaraha ahaa intii uu qabtay iyo qaabki foosha xumaa ee shaqada looga qaaday ayaa u kasbay taageerayaal badan.
Qudbada madaxweynaha ayaa isugu jirtay, waano, wacdi, dhiiri galin, iyo caddayn waxa uu rabo iyo waxa uusan yeelayn. Waxaa uu sheegay inuusan marnaba is dhiibayn hoosna isu dhigayn. Waxaa uu yiri isagoo na tusayo inuusan marnaba ka leexanayn waxa uu aaminsan yahay, marki aad ka yaabto sida wax u socdaan iyo dhibka laguu abuurayo “waxaa lagu dhihi dadkaan dowladnimo ma rabaane dantaada ilaasho, taasna marnaba yeeli mahayo”. Hadalkaan ayaan hubaa in lagu yiri waayo anaaba la igu dhahaa muu dantiisa ilaashado dadkaan daacadnimo ma rabaane.
Sababta keentay isbadalkaan ayaa la iswaydiinayaa siyaabo badan ayaana loo turjumay. Anuguse waxay ila tahay waxaa sabab u ah inuu laxow baxay lana qabsaday xafiiska. Haddii aad xasuusataan, wuxuu qudbayn jiray isagoo wadan wax waraaq ah. Balse shalay iyo maanta oo uu Qardho joogayba (maalmo kale waa jireen oo uu waraaq haystay sida maalintii uu tababarka u xiray ciimada ku jiro xerada Turkiga) warqad ayay wax ugu qornaayeen. Waxay u muuqataa inuu shaqaaleeyay dad xirfad u leh qoridda qudbooyinka taasoo ah tallaabo wanaagsan hadduu sameeyay.